Madaxweyne Farmaajo oo tacsi u diraya dhammaan Muwaadiniintii dhibaatadu kasoo gaartay falalkii argagixiso ee maanta dhacay Muqdisho. – Gedo Times
23rd March 2019 admin Wararka Maanta 0
Madaxweyne Mohamed Abdullahi Farmaajo oo tacsi u diraya dhammaan Muwaadiniintii dhibaatadu kasoo gaartay falalkii argagixiso ee maanta dhacay ayaa yiri.
”Innaa Lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun. Alle ha u naxariisto dhammaan dadkii ku shahiiday falalkii waxshinimada ahaa ee maanta dhacay oo uu kamid ahaa Xildhibaan Saqar Ibraahim Cabdalla oo ahaa Wasiir Ku Xigeenka Wasaaradda Shaqada iyo Arrimaha Bulshada.
Sugidda nabadgalyada waa masuuliyad saaran ciidamada iyo hay’adaha amniga, waana in ay dardargeliyaan hawlaha loo igmaday si looga hortago dhagarta ay kooxaha argagixisada ahi la maagan yihiin shacabka Soomaaliyeed, shacabkuna waa in ay gacan ka geystaan sugidda nabadgelyada.”
Daawo:Munaasabadii daahfurka Shirkada Daryeel oo kashaqaynaysa Bilicda Magaalada Balanbale